ဒျေါလေးနှငျ့တဈထောငျ့တဈည – My Blog
ပှကွီးတဈယောကျ ၁၀တနျးဖွပွေီးတညျးက အိမျမွဲနသေညျ။ ကြောငျးတကျကတညျးက အိမျမှကြောငျး၊ ကြောငျးမှကြူရှငျ၊ ကြူရှငျမှအိမျ ဤသုံးနရောဖွငျ့ သာ အခြိနျကုနျနခေဲ့သညျ။ မိဘမြားက အပွငျထှကျခွငျးကို ခှငျ့မပွုသညျ့အပွငျ ပှကွီးကိုယျတိုငျကလညျး အိမျမှာပဲ အိမျတှငျးပုနျးနရေသညျကိုသာ သဘောကြ၏။ ၁၀တနျးပွီးတော့ သူငယျခငျြးမြားက ခရီးထှကျဖို့ချေါတာတောငျ မလိုကျပဲဇှတျကနျြနခေဲ့၏။ အိမျကအမကေ တောငျမှ “သားရယျ ပငျြးနေ မှာပေါ့ လိုကျသှားလိုကျပာ” လို့ပွောတာတောငျ မလိုကျပဲနခေဲ့သညျ။ အခုလညျး ပှကွီးအဖေ သင်ျဘောထှကျလို့လဆေိပျပို့ဖို့ကို မလိုကျခငျြဘူးဟုဇှတျငွငျး နသေညျကို အမကေ “ဟဲ့သား ကိုယျ့အဖခေရီးထှကျမှာကို စိတျညဈအောငျလို့၊ တောကျ သညျးခံတာလှနျလာပွီနျော ပှကွီး” “ကလေးကိုမဆူပါနဲ့ မိနျးမ ရယျ” “ဒီမှာသား သားမလိုကျခငျြရငျနခေဲ့၊ အဖမေရှိတုနျး မငျးအမကေို ဂရုစိုကျနျောသား ကွားလား” “ဟုတျ အဖေ” အမလေညျး မတတျသာ၍ ဘာမှ ဆကျမပွောတော့ပေ။ဒီလိုနဲ့ အဖခေရီးထှကျပွီးကတညျးက အိမျမှာပှကွီးတို့ သားအမိ နှဈယောကျသာကနျြနခေဲ့၏။ “ကလငျ…..ကလငျ….” “သားရေ ဖုနျးလာနတေယျ ကိုငျလိုကျအုံး အမေ ဒီမှာ ဟငျးကိုငျနလေို့” “ဟုတျ.. ဟုတျ” ပှကွီးတဈယောကျအခနျးထဲအပွာကားကွညျ့ပွီး ဂှငျးတိုကျနရောမှ အောကျ ထပျသို့ဆငျးကာ ဖုနျးကိုငျလိုကျ၏။
” ဟဲလို…ဟဲလို ဘယျသူလဲ” “ပှကွီးလား…” တဈဖကျကဖုနျးသံကွောငျ့ပှကွီး ဇဝဇေဝါ ဖွဈနသေညျ။ “ဟုတျ ကြှနျတျောပှကွီးပါ “ “အေး ငါ့တူ ဦးပါကှ မ ငျ့ဦးလေး လေးသိနျးလကှော” “သွျော လေးသိနျး ပွောလေ” ” အေး ဦးတို့မိသားစု နကျဖွနျမငျးတို့ဆီလာဖို့ ဖုနျးဆကျတာ ဒါနဲ့ငါ့အဈမ မငျးအမရေော” “အ မကေအခုဟငျးကိုငျနလေို့ သားပဲဖုနျးကိုငျလိုကျတာ အမနေဲ့ပွောအုံးမလား” “နေ နေ ငါ့တူ ဦးတို့လာမယျဆိုတာသာ မငျးအမကေိုပွောပေးထား ဟုတျပွီ လား” “ဟုတျ..ဟုတျ” “အေး..အေး ဒါပဲ ငါ့တူ” ဦးလေးသိနျး ဖုနျးခလြိုကျပွီးနောကျ ပှကွီးလညျး အိမျပျေါထပျသို့တကျရနျ ပွငျလိုကျပွီးမှ နောကျဖေးသို့ လှညျ့ဝငျကာ “အမရေေ ဦးလေးသိနျးတို့လငျမယား နကျဖွနျလာမယျတဲ့” “အေး အေး သူတို့ နဖေို့အခနျးရှငျးလိုကျအုံး” “ဟုတျ အမေ” ပှကွီးလညျးစကား ဖွတျ၍အခနျးထဲဝငျကာ ကွညျ့လကျစ ဖူးကားကိုဆကျကွညျ့၍ဂှငျးတိုကျလိုကျ၏။ ထိုစဉျ အရိုငျးဆနျသော စိတျအတှငျးသို့ လေးသိနျးမိနျးမ ဒျေါလေး ဝေ၏ပုံရိပျသညျ တဈစ တဈစနှငျ့ တိုးဝငျလာလသေညျ။ ။
ပှကွီးအမနှေငျ့ဦးလေးသိနျးတို့မှာ ဖမေတူမကှေဲ တဈဝမျးကှဲမောငျနှမဖွဈသလို ဆှမြေိုးထဲတှငျလညျး အရငျးနှီးဆုံး၊ အချေါအပွောရှိဆုံးပငျ။ပှကွီးတို့ အဘိုးအဘှားတကေလညျးနယျတှငျနထေိုငျကွပွီးတခါတလသောအလညျလာကွသညျ။ဦးလေးသိနျးတို့ကတော့မကွာခဏ ဆိုသလို ရနျကုနျအလညျလာ ပွီး လာတိုငျး လာတိုငျး ရှာလကျဆောငျ တဈခုမဟုတျတဈခုက ပါလာတတျသညျ။ လှနျခဲ့သော၂ နှဈကမှနဖူးစာလညျပွီး ရနျကုနျသူ ကရငျမတဈယောကျ နှငျ့ညားကာ ရနျကုနျမှာပဲ အခွခေနြကွေသညျ။ အခုဆို လေးသိနျးသားတောငျမှ ဆယျလပွညျ့တော့မညျ။ လေးသိနျးမိနျးမ ဒျေါလေးဝသေညျ ဦးလေးနှငျ့မယူ ခငျက အပျခြုပျဆိုငျမှ အပျခြုပျသမ ဘဝနှငျ့ လုပျကိုငျနခေဲ့သညျ။ လေးသိနျးနှငျ့ယူပွီးမှ အလုပျထှကျကာ ကိုယျပိုငျအပျခြုပျဆိုငျတဈခုထောငျထား၏။ ဒျေါလေးဝသေညျ ၃၂နှဈသာရှိသေးသောလုံးကွီးပေါကျလှ ဖွဈသလို ကရငျကပွားဖွဈသဖွငျ့ အသားမှာလညျး ဖွူစှတျလှသညျ။ တငျသားမြားမှာ လုံးဝနျး ပွီး ဘေးဘကျသို့ စှငျ့စှငျ့ငှားငှား ကားထှကျနေ၏။ ထမိနျဝတျတိုငျး တငျသားမှာကားထှကျနပွေီး ဘေးမှကွညျ့လြှငျ လှနျတရာမှကောကျခြိတျလှ၏။ အို တဈခါလောကျတော့ လိုးခငျြစမျးပါဘိ။ မင်ျဂလာဆောငျမှာကတညျးက မွငျလိုကျရသော ဒျေါလေးဝေ၏တငျမှာ အခုခြိနျထိ မှနျးထုနမေိဆဲပငျ။
“သားရေ အိမျရှမှေ့ာကားသံကွားတယျ ထှကျကွညျ့လိုကျအုံး” “ဟုတျ..ဟုတျ” ပှကွီးတဈယောကျ TV ကွညျ့နရောမှအိမျပွငျသို့ ထှကျကွညျ့လိုကျ၏။ “အ မရေေ လေးသိနျးတို့လာပွီ” “လာ..လာ လေးသိနျး” ပှကွီးလညျးနောကျခနျးတံခါးဖှငျ့ကာ အိတျမြားကူသယျနေ၏။ ထိုစဉျ ကားထဲမှ ဒျေါလေးဝကေလေးခြီ ကာဆငျးလာသညျ။ အိတျသယျသလိုနှငျ့ ဒျေါလေးအား မသိမသာခိုးခိုးကွညျ့နသေညျမှာ ပှကွီးသာ။ ကွီးလိုကျတဲ့အိုး မင်ျဂလာဆောငျတုနျးတောငျ ဒီလောကျ ကွီးမယျမထငျ။ အခုအနအေထားသညျစကောလောကျတော့ အနညျးဆုံးရှိလောကျမညျ။ ဒီထကျပိုအံ့သွသညျက ကလေးစို့နသေောရငျသားမြားပငျ။ တှစေ့ တုံးက တငျသာကွီးတာ ရငျကတော့ သူလိုငါလို။ မကွီးမသေးပဲအနတေျောပငျ။ အခုမွငျနရေသညျမှာလမှေုတျပူဖောငျးအရှယျလောကျ။လကျတဈဖကျနှငျ့မ ဆနျ့ နှဈဖကျပေါငျးမှဆုံမယျထငျ။တဈသားမှေးပွီး တဈသှေးလှလာသော ဒျေါလေးအားငေးရငျး စိတျထဲ၌ အကွိမျတဈရာလောကျလိုးနမေိ၏။ ဒျေါလေး နောကျကလိုကျရငျးငပဲမှာ သိသိသာသာတောငျမတျလာ၏။ အမတေို့မမွငျခငျ အမွနျဖုံးကာအိမျထဲသို့ဝငျခဲ့၏။
ပှကွီးတဈယောကျ ပုံမှနျအတိုငျး အိပျရာဝငျခဲ့သျောလညျး ထူးထူးဆနျးဆနျးအိပျမပြျောပေ။ မကျြစိကိုစုံမှိတျပွီး အိပျနသေျောလညျးဒျေါလေးဝေ ကောကျကွောငျးမြားကအိပျမရအောငျနှိုးဆှပေးနေ၏။မကျြစိမှိတျလိုကျတိုငျး ထမိနျခြှတျပွီး ဖငျကုနျးပေးနသေော ဒျေါလေးဝပေုံရိပျမြားကညီတျောမောငျ င ပဲအား အစှနျးကုနျထောငျမတျစသေညျ။ ထမိနျကိုအောကျစမှ အသာအယာလှနျတငျပွီး အတှငျးခံလေးကိုခြှတျ စောကျဖုတျကိုလကျကလေးနှငျ့ဖွဲကာဖငျကုနျးပေးနသေော ဝကေိုမှနျးရငျးအနီးရှိကွှပျကွှပျအိတျခံကာဂှေးကိုတရစပျထုနေ၏။ ဂှငျးတိုကျနစေဉျ ခွရေငျးခနျးရှိလေးသိနျးတို့ထံမှ အသံသဲ့သဲ့ကိုပှကွီး တဈယောကျနားစှနျနားဖြား ကွားလိုကျရ၏။ ဒီလငျမယားနှဈယောကျ ဇာတျလမျးစနပွေီနဲ့ တူတယျ။ ပှကွီးဂှငျးတိုကျနရောမှထကာလေးသိနျးအခနျးတံခါး သို့နားကပျလိုကျ၏။ “ွပွတျ…ွပွတျ” ဟငျ…ဒါကလေးနို့တိုကျနတောပဲ။ တျောပွီကှာ ဂှငျးပဲပွနျတိုကျတော့မညျဟုလှညျ့အထှကျ “ကိုသိနျး…တျောတော့ ကှာ..ကလေးနဲ့လုစို့နတေယျ” “ကိုယျ့မိနျးမကလညျးကှာ ညဆိုကိုယျကကလေးပဲပေါ့.. ဟဲ…ဟဲ” ပှကွီးလညျးအသံနှငျ့သာမက အမွငျနှငျ့ပါကွညျ့ခငျြလာ သညျ။ ပှကွီးတို့အိမျသညျ သဈသားနှဈထပျအိမျပီပီ အခနျးမြားကိုသုံးထပျသားပွားဖွငျ့သာခွားထားသညျ။
ဆောကျထားသညျကလညျးကွာ ကွှကျတှကေလညျးပေါတာကွောငျ့ အခြို့သုံးထပျသားမြားတှငျ အပေါကျငယျလေးမြားမှာလကျညိုးတဈခြောငျးစာဝငျ ဆနျ့၏။ ပှကွီးတဈယောကျခြောငျးပေါကျရှာရငျး လကျသနျးရှယျအပေါကျလေးတဈခုကို သှားတှသေ့ညျ။ မွငျကှငျးရှငျးအောငျ အပေါကျကိုလကျသနျးဖွငျ့ ထိုးခြဲ့လိုကျသညျ။ ထိုစဉျ ပှကွီးမွငျလိုကျရသောမွငျကှငျးမှာ ဒျေါလေးဝေ၏ နို့တဈဖကျတှငျ ကလေးစို့၍ ကနျြတဈဖကျကို လေးသိနျးက အငမျးမရကုနျးစုပျ နေ၏။ လေးသိနျး အစုပျကောငျး မှုကွောငျ့ဒျေါလေးဝခေမြာ ခေါငျးလေးမော့ မကျြလုံးကလေးစငျးပွီး တဈခကျြတဈခကျြ နှုတျခမျးကိုကိုကျဖဲ့နေ၏။ ပှကွီး ကတော့ ကွညျ့မွဲကွညျ့ဆဲပငျ။ “ဝေ…သားလေးအိပျသှားပွီလား” “ရှူး…တိုးတိုး…အိပျပြျောနပွေီ” “အာ့ဆိုကိုယျ့ပေး ပုခကျထဲထညျ့သိပျလိုကျမယျ” ဒျေါလေးဝဆေီမှကလေးကိုတယုတယခြီကာ ပုခကျထဲထညျ့ပွီး အနညျးငယျလှဲပေး၏။ ထို့နောကျ ဒျေါလေးဝဘေကျလှညျ့ကာ “ဝေ…လုပျငနျးစရအောငျ” “မဖွဈဘူးထငျတယျ ကိုသိနျး အောကျမှာအမရှိတယျ ပွီးတော့ သားလေးနိုးသှားလိမျ့မယျ” “မနိုးပါဘူးကှာ…အိပျနတောမှကြိုးနတောပဲ အမမကွားအောငျ တော့ အသံမထှကျနဲ့ပေါ့ လာပါ” “ကိုသိနျး…မဖွဈဘူးနျော… ကိုသိနျး… မဖွဈဘူး…. အား….ရှိ….အား… ကိုသိနျး” ဒျေါလေးဝတေားခြိနျမရလိုကျပေ။ လေး သိနျးကဒျေါလေးဝေ ထပျမငွငျးခငျထမိနျ လှနျကာစောကျဖုတျအား ကုနျးယကျလေ၏။ ဒျေါလေးဝကေတားသာတားနတော တကယျတော့ သူကိုယျတိုငျက လညျး အယကျခံခငျြနသေညျ။ လေးသိနျးခေါငျးကိုကိုငျကာ စောကျဖုတျနှငျ့ မကျြနှာမလှတျအောငျကပျထားလိုကျ၏။ လေးသိနျးတဈခါယကျလိုကျတိုငျး ဒျေါလေးခမြာ ကော့ကော့တကျကာ တဟီးဟီးနှငျ့ညဉျးနေ၏။
လေးသိနျးမှာ တောသားဆိုသျောလညျးခပေုံမပျေါ။ မယူယုံတမယျ ထညျလဲတှဲခဲ့သူမို့ ဘာဂြာပေးရာတှငျတဈဖကျကမျးခတျကြှမျးကငျြလှသညျ။ စောကျစိ ကလေးကိုနှုတျခမျးဖွငျ့ ဆှဲစုပျကာ အတှငျးသားမြားကို လြှာဖွငျ့ ကလျောပေး၏။ ဒျေါလေး လကျတဈဖကျက လေးသိနျးခေါငျးကိုကိုငျပွီး ကနျြတဈဖကျက သူနို့သူ ညှဈခနြေေ၏။ “ကိုသိနျးရယျ….ဝေ့ နို့တှခေပြေေးစမျးပါ… ခြေ..ခြေ.. ဟုတျပွီ..ခြေ….အား….ရှိ…..အား” ဒျေါလေးတဈယောကျ ရမကျကွီးထနျ နေ၏။ လေးသိနျးကုနျးယကျနသေော အဖုတျတဈဝိုကျ ကွမျးပွငျတှငျ အရညျမြား စိုရှဲနေ၏။ လေးသိနျးလညျး လြှာဖွငျ့ယကျနရေုံမက လကျညိုးနှငျ့ လကျခလယျပူးကာ အဖုတျထဲသို့ တရစပျ သှငျးလိုကျ ထုတျလိုကျ သှငျးလိုကျ ထုတျလိုကျလုပျနေ၏။ ” ကိုသိနျး…ဝေ..မရတော့ဘူး” ဆိုကာလေးသိနျးအား တှနျးဖယျလိုကျပွီး ကြောပေးကာ ထမိနျလှနျပွီး ဖငျကုနျးနေ၏။ ဒျေါလေးဝသေညျ အသားဖွူရုံမက ဖငျသားမြားမှာလညျးဖွူဖှေးပွီး တဈခကျြရိုကျလိုကျ တိုငျး တုနျခါသှား၏။ “ကိုသိနျး….ဝကေို့ လိုးပေးစမျးပါ..ဝအေရမျးခံခငျြနပွေီ” လငျမယားမို့လို့လားမသိ အငျမတနျမှ ပှငျ့လငျးနေ၏။ကာမစိတျ၏တောငျး ဆိုမှုကို ဒျေါလေးတဈယောကျ ခါးစီးခံနရေ၏။ “နအေုံးလေ…ဝေ…ကိုယျ့ပွနျစုပျပေးအုံးလေ” ဒျေါလေးဝေ ဖငျကုနျးနရောမှ နောကျပွနျလှညျ့ကာ လေးသိနျး ပုဆိုးအားဆှဲခြှတျလိုကျလေ၏။ ဟိုကျ….။ပှကွီးမကျြလုံးပွူးသှားလေ၏။ ရှညျလြားပွီး မဲသညျးနသေော လေးသိနျးလီးကွီးမှာ ၆ လကျမပတေံတဈခြောငျး စာလောကျရှိမညျ။ ရှာသားလီး ရှညျသညျကို မွငျဖူးယုံ ကွုံဖူးမှလကျခံမိသညျ။ ထို့ထကျပိုအံ့သွသညျကဒျေါလေးဝေ ဖငျကွီး။ အစက ဖငျကုနျးနစေဉျ ပှကွီး ခြောငျးပေါကျဆီသို့မကျြနှာမူရာမှ တဈဖကျလှညျ့သောအခါ ဒျေါလေးဝေ ဖငျကွီးမှာ ပှကွီး ခြောငျးပေါကျနှငျ့ကှကျကှကျ ကှငျးကှငျး တနျးနေ၏။
ပှကွီးတဈယောကျပှပေါကျတိုးကာဖငျကွီးကိုကွညျ့ရငျး ဂှငျးတိုကျနေ၏။ မှနျးဆသမြှ တနျးရခကျြကတော့ ပွောမပွောခငျြ။ ထမိနျအောကျက မိမှေးဖမှေး စောကျဖုတျလေးကို မွငျခငျြခဲ့သညျမှာ ရူးမတတျပေ။ အခုတော့ ကှကျကှကျကှငျးကှငျး ကှငျးကှငျးကှကျကှကျကို မွငျနရေသညျ။ “ဒျေါလေးရယျ” ဟု တဈ ခကျြညဉျးကာ တဈဖကျကကွှပျကွှပျအိတျခံ ကနျြတဈဖကျက အရညျထှကျမစောရနျ ဖွညျးဖွညျးခငျြးထုနေ၏။ ဒျေါလေးမှာမှေးရာပါ လီးစုပျကြှမျးသညျမ သိ။ ဒျေါလေး၏စုပျခကျြအောကျတှငျ လေးသိနျးတဈယောကျအသားကုနျဖီးတကျနေ၏။ လီးစုပျရုံသာမက လဥကိုပါ ငုံပွီးလြှာဖွငျ့ ကလိပေးနေ၏။ ထို့နောကျ ခေါငျးကိုကိုငျကာ အဖုတျကို လိုးသလို အဆတျမပွတျစောငျ့ပေး၏။ ဆောငျ့ခကျြတိုငျးမှာ တအုအု နှငျ့ စညျးခကျြညီလှသညျ။ ဒျေါလေးဝေ လီးစုပျ နရောမှာ တဈဖကျလှညျ့ကာ ဖငျပွနျကုနျးနေ၏။
“ကိုရယျ….လိုးပေးတော့ကှာ…” လေးသိနျးတဈယောကျ ထိုငျနရောမှ ကုနျးထကာ ဒူးထောကျပွီး လီးကိုအဖုတျဝသို့တလေို့ကျ၏။ သို့သျော ခကျြခငျြးမ သှငျးသေး အဖုတျကှဲကွောငျးတဈလြှောကျ လီးဖွငျ့ပှတျဆှဲနေ၏။ “ဝေ…ကို လိုးတော့မယျနျော” “အငျးပါ လိုး..လိုး…စောကျဖုတျကှဲအောငျလိုး..ဝေ ခံခငျြ လှပွီ..အီး..” အရေးထဲလေးသိနျးတဈယောကျ နားအရသာခံနေ၏။ ဒျေါလေးဝေ တဏှာစိတျကွောငျ့ အသနားခံနသေံမှာ လေးသိနျးသာမက ပှကွီး ရမကျ စိတျကိုပါ အုံကွှလာစသေညျ။ လေးသိနျးလညျး သူ့ရှဈလကျမ လီးရှညျကွီးကိုဒျေါလေးဝေ စောကျဖုတျအတှငျးသို့ဖွညျးဖွညျးခငျြး ထိုးသှငျး၏။ မကွာမီ လေးသိနျးလီးမှာစောကျဖုတျထဲသို့အဆုံးထိ မွုပျသှား၏။ အစ တှငျဖွေးဖွေးခငျြး ရှတေို့းနောကျဆုတျလုပျနပွေီး နောကျပိုငျးတှငျ အရှိနျရလာသညျနှငျ့အမြှ စညျးခကျြမွနျလာသညျ။ ဒျေါလေးမှာ အပေးကောငျးသလို လေးသိနျးမှာ အလိုးကောငျးသောကွောငျ့ အတိုငျအဖောကျညီစှာ ကာမအရသာကို ကောငျးစှာ ခံစားနကွေသညျ။ “ကိုသိနျး…ခပျကွမျးကွမျးလေးစောငျ့လိုး…ဝေ့ မညှာနဲ့… လိုးသာလိုး..ဝွပေီးခါနီးပီ….အား… အား…ကောငျးလိုကျတာ ကိုရယျ…အား… အား..” “ဖတျ…….ဖှတျ……ဖတျ……..ဖှတျ….. ဘလှတျ…..ပွှတျ…အား…အား….” ဒျေါလေးဝေ ကမ်ဘာပကျြနသေညျ။ အိမျအောကျတှငျ အမရှေိသညျကို သတိမရတော့။ ကာမစိတျက ကွီးစိုးနသေညျ။ အရှိနျရလာသညျနှငျ့အမြှ လီးတံကွီးမှာ အဖုတျအတှငျးသို့အငမျးမရ တိုးသှငျးနေ၏။ ဆောငျ့ခကျြတို့မွနျလာ သညျ။ ကွမျးလညျးကွမျးလာသညျ။ တှဲကနြသေော နို့အုံမြားကိုဆှဲကာ အသာကုနျမောငျးတငျနေ၏။
“ကိုသိနျး…စောငျ့..စောငျ့…အား… အား…” မကွာမီပငျ အသားကုနျလိုးနရောမှလငျမယားနှဈယောကျ ပွိုငျတူပွီးသှားလေ၏။ လေးသိနျးလညျး လရညျမြား ကို ဒျေါလေးအဖုတျထဲသို့ ပနျးထညျ့လိုကျပွီး တဈခြိနျတညျးမှာ ပှကွီးလညျး ကွှပျကွှပျအိတျထဲသို့ သုတျရညျအမွောကျအမွား ပနျးထညျ့လိုကျ၏။ လေး သိနျးမှာ ဒျေါလေးအပျေါမှမိုးကာ နှုတျခမျးခငျြးနမျးရှိုကျရငျး နို့အုံမြားကို ဆှဲညှဈကာ အမောဖွနေကွေ၏။ ပှကွီးလညျး ပနေသေော သုတျရညျမြားကို တဈ သြှုးဖွငျ့ သုတျပွီးနောကျ အိပျယာထဲလှဲကာ ပွနျအိပျနလေိုကျ၏။ ပှကွီးတဈနလေုံ့းတဈစကျကလေးမှ အိနွေ်ဒရမေရပေ။ မနညေ့ကလေးသိနျးတို့ လငျမယား ပကျပကျစကျစကျလိုးခနျးကိုမွငျပွီးကတညျးက တဈသကျစားမကုနျသော ဒျေါလေးဝေ ဖငျတုံကွီးကို လိုးခငျြလိုကျတာမှ ရှပိုးထိုးနသေညျ။ပှကွီး ကံကောငျးခငျြတော့နယျကအဘှားအရေးပျေါဆေးရုံတတျရမညျဖွဈ၍အမဖွေဈသူကခရီးထှကျရမညျ ဦးလေးသိနျးကလညျးသူပါလိုကျမညျဆိုတော့အမေ ကသူ့တယောကျထညျးစိတျမခနြိုငျပေ။ထို့ကွောငျ့ဒျေါလေးဖွဈသူကိုပါအိမျစောငျ့အတူထားခဲ့ပသေညျ။ပှကွီးယောကျညမွနျမွနျရောကျစခေငျြပီလူကလညျး တတျကွှနပေီ သူ့အဒျေါ ဒျေါဝကေိုလညျးအရမျးလိုးခငျြနပေီ။ ဘယျလာကျပဲ ပြော့ခှနေပေါစေ ဖွူလှပွီး လုံးကဈြသော တငျပဆုံကွီးကို မွငျလိုကျတိုငျး လီး ကဆကျခနဲ ဆကျခနဲ တောငျမတျလာသညျ။ လိုးခငျြသညျမှာလညျး လူးလိမျ့နပွေီ။ ဒီထကျဆိုးရငျရူးတောငျသှားနိုငျတယျ။မဖွဈသေးဘူး။ နှဈခါပွနျမရနိုငျတဲ့ အခှငျ့အရေးကို ပှကွီးဘယျလိုမှလကျမလှတျနိုငျဘူး။ ဒီတော့ ပှကွီးတဈယောကျ မကွံကွီးစညျရာတှေ ဘာတှမေသိ။ ဖငျကွီးမဒျေါလေးကို ဒီည အသားကုနျ လိုးရနျကွံစညျတော့၏။
“ဒျေါလေး” “ဟေ…ဘာပွောမလို့လဲသား ပွောလေ” “ဒီမှာ ဒျေါလေးအတှကျ နှားနို့ဖြျောလာတယျ” “သွျော…အေး အေး..သားရော မသောကျဘူးလား” “ကြှနျတျောသောကျပွီးပွီ ဒျေါလေး” “အေး.. အေး..ကြေးဇူးပဲကှယျ” ပှကွီး နှားနို့ပေးပွီးနောကျ မီးဖိုခြောငျသို့ပွေးဝငျပွီး ဒျေါလေး သောကျမသောကျကို သခြောအောငျ ခြောငျးကွညျ့နေ၏။ အကွောငျးကား ဖြျောထားသော နှားနို့ထဲတှငျ ဒျေါလေးအတှကျ စပါယျရှယျအိပျဆေးမြား ပါသောကွောငျ့ပငျ။ တဈ ကြိုကျပွီးတဈကြိုကျ မော့သောကျ နသေော ဒျေါလေးအား ငေးကွညျ့ရငျး စိတျထဲတှငျ ဒီညတော့ အမုနျ့းဆှဲပဈမညျ ဟုကွုံးဝါးနေ၏။နာရီဝကျခနျ့ကွာ သျော…. “သားရေ…ဒျေါလေးအိပျငိုကျလာလို့ မငျ့ညီသိပျပွီး အိပျတော့မယျ.. တံခါးတှသေခြောပိတျနျော” “ဟုတျကဲ့ ဒျေါလေး” ဟိုကျ…. ဆေးစှမျးကတော့ ပွနပွေီ ပွနပွေီ။ ကနျြတာ နှဈပါးသှားကဖို့ အခြိနျစောငျ့ဖို့ပဲလိုတော့တယျ။ ဒျေါလေးအိပျပြျောမှအခွအေနကွေညျ့ပွီး စခနျးသှားရမယျ။ ပှကွီးတဈယောကျ မိနျ့မိနျ့ကွီးပွုံးကာ နာရီစကျသံ တဈခကျြတဈခကျြကို လိုကျလံမှတျသားနေ၏။ အို..။ အခြိနျကုနျသညျမှာနှေးလှနျးလှသညျ။ နာရီဝကျခနျ့ကွာသျော ဒျေါလေး အိပျပြျောနပွေီအထငျနှငျ့အရဲစှနျ့ကာ အိမျပျေါသို့တဈလှမျးခငျြးတိတျဆိတျစှာတကျလာ၏။
အိပျခနျးထဲတှငျညီလေးမှာပုခကျထဲအိပျပြျောနပွေီး ဒျေါလေးမှာဖြာပျေါတှငျ ဘေးစောငျးလကျြအိပျပြျောနသေညျ။ အခနျးထဲအဝငျတံခါးပေါကျဘကျခွမျးသို့ ကြောပေးအိပျနသေောကွောငျ့ စူကားပွီးပွူထှကျနသေောဖငျတုံကွီးမှာပှကွီးအားစိနျချေါနေ၏။ ပှကွီးရမကျစိတျက အသိစိတျကိုလှမျးခွုံသှားလေ၏။ ခွသေံမကွားရအောငျ တိတျတိတျလေး လှမျးကာ အခနျးထဲဝငျ၍ ဒျေါလေးနောကျဘကျတှငျ လှဲကာနရောယူလိုကျ၏။ နှဈနှဈခွိုကျခွိုကျအိပျပြျောနေ သျောလညျး ပိုသခြောအောငျ ဒျေါလေးအားလှုပျနှိုးကာ အိပျပြျောမပြျောအရငျစမျး၏။ သခြောမှ လညျဂုတျနားကပျကာတဈခကျြနမျးရှိုကျလိုကျ၏။ မှေးလိုကျ တဲ့ကိုယျသငျးနံ့။ ဒျေါလေးရဲ့ပငျကိုအမှေးနံ့တို့ကပှကွီးအားပို၍စိတျကွှလာစသေညျ။ ပှကွီးလကျကဒျေါလေးခါးနားသို့ကပျကာ ခညျြထားသောထမိနျစကို အသာအယာလေး နောကျဘကျမှလှမျးဖွညျလိုကျ၏။ ပွီးနောကျ အကငြ်္ီအတှငျးသို့လကျ လြှိုကာ နို့ရညျပွညျ့တငျးနသေော ရငျသားကို ဖှဖှလေး ဆုပျလိုကျ ညှဈလိုကျ လုပျနေ၏။
“အငျး…..” ထိုစဉျ ဒျေါလေးဆီမှညဉျးသံထှကျပျေါလာသညျ။ နို့ကိုကိုငျပွီး ညှဈနသေောပှကွီးညဉျးသံကွားသညျနှငျ့လနျ့ဖနျြ့ပွီး ဇောခြှေးပွနျကာ ညှဈနေ သောလကျကိုရကျတနျ့လိုကျ၏။ ဒျေါလေးမှာ တဈခကျြသာညဉျးပွီး ရှူး…ရှူးနှငျ့ပွနျအိပျပြျောသှား၏။ ပှကွီးလညျးပွနျအိပျပြျောအောငျစောငျ့ပွီးမှ လကျကို ထုတျကာ ပွနေသေောထမိနျစအတှငျးသို့ ဗိုကျသားပျေါမှ တိုးဝငျသှား၏။အထဲတှငျ အတှငျးခံမပါသောအဖုတျနှငျ့ပှကွီးလကျတို့မှာ တဖွညျးဖွညျး မိတျ ဆကျသှား၏။ ပှကွီးလကျမှာ ဆီးခုံပျေါရှိ အမှေးပါးလေးတှကေို စမျးရငျးအကျကွောငျးတဈလြှောကျပှတျဆှဲနသေညျ။ ဒျေါလေး အဖုတျကိုပှတျဆှဲနသေော အထိအတှမှေ့ာ ကွကျသီးမှေးညငျးထလာပွီး လီးမှာတဆကျဆကျ တောငျမတျလာသညျ။ လိုးခငျြလှနျး၍ အရညျကွညျမြား ထပျတှငျစို့လာသညျ။ ဒျေါလေး ဝမှောဘာမှမသိ အိပျဆေးကွောငျ့ကြိုးနသေညျ။ ပှကွီးလညျး တောငျမတျနသေောပုဆိုးထဲမှ လီးကို ထုတျကာ ဖငျအကျကွောငျးတဈလြှောကျ ပှတျ ပေး၏။ ပှတျရငျးပှတျရငျး ထနျလာကာ အဆငျ့တကျပွီး ဒျေါလေးဝေ ထမိနျကို အောကျစမှဆှဲ လှနျတငျလိုကျ၏။ ပွီးနောကျ လီးကိုပေါငျနှဈလုံးကွားထညျ့ ကာ ရှတေို့းနောကျဆုတျလုပျနေ၏။
“အီး….အား….အီး….” ဒျေါလေးဝေ ညဉျးသံ တဈစတဈစ ကယျြလာသညျ။ သို့သျောလူကမနိုးသေး။ အိမျမကျထဲ၌အလိုးခံနပေုံရတယျ။ မသိစိတျက ဖီး တကျနတောလားမသိ အဖုတျအတှငျးမှ အရညျမြားစိမျ့ထှကျလာသညျ။ ပှကွီးစလိုးရငျပွငျလိုကျ၏။ သူ့လီးအား တံတှေးစှတျကာ အဖုတျထဲမထညျ့ခငျ ခြော နအေောငျ ဂှငျးတိုကျလိုကျ၏။ ပွီးနောကျလီးကိုအရငျးမှကိုငျ၍ အဖုတျဝနားနှငျ့လီးထိပျကိုတကေ့ာ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ထိုးသှငျး၏။ လေးသိနျး ညတိုငျးလိုး သညျကတဈကွောငျး၊ အဖုတျထဲတှငျ ရှဲစိုနသေညျကတဈကွောငျး လီးမှာဇှတျမသှငျးရပဲ သူ့အလိုလို လြှောခနဲတိုးဝငျသှားသညျ။ သှငျးရငျးသှငျးရငျး လီး လညျးတဈဆုံးဝငျနခြေိနျ ဒျေါလေးမှာရုတျတရကျ လနျ့နိုးလာလေ၏။ နိုးနိုးခငျြး အဖုတျထဲလီးဝငျနသေညျကို သိသညျနှငျ့ အတငျးပငျ နငျးကနျရုနျးလေ၏။ “ဟဲ့ ပှကွီး နငျ….နငျ…လှတျ ငါ့ကိုလှတျ…ခှေးကောငျ….ဖယျလို့…” အိပျမကျထဲ၌လေးသိနျးလိုးနသေညျဟုထငျနသေော ဒျေါလေးဝတေဈယောကျ ပှကွီး မှနျးသိသျော နငျးကနျရုနျးလေ၏။ အမှနျကမူ နလေ့ညျကတညျးက ပှကွီးလီးကို မွငျပွီး ခံခငျြနသေညျမှာ စောကျဖုတျထဲ လီးထညျ့စိမျထားခငျြလောကျ အောငျပငျ။ သို့သျော လကျတှတှေ့ငျ လငျပါတူ ဖွဈနသေညျက ဒျေါလေးဝအေား ရုနျးကနျစေ၏။ ပှကွီးမှနျးသိသျော အတငျးပငျအိပျနရောမှ ကုနျးထ၏။ ရုတျတရကျထလိုကျသောကွောငျ့ စောကျဖုတျထဲတှငျစိမျထားသောပှကွီးလီးမှာ ပွှတျခနဲ ကြှတျထှကျသှား၏။
ပှကွီးကား ခသေူမဟုတျ။ အောကားပေါငျး သောငျးခွောကျထောငျကို ကွညျ့ဖူးသူမို့ ဒျေါလေးဝေ ဘယျယုနျမွငျ၍ ဘယျခြုံထှငျနမှေနျး တနျးခနဲရိပျမိ၏။ ဒါ ဟာ အစမို့ မူနတော နောကျကရြငျ သူဟာသူအလိုလို ပါလာမှာ။ အရေးကွီးတာက ဒျေါလေးဖီးတကျအောငျလုပျဖို့ဘဲ။ ရုတျတရကျထရပျသော ဒျေါလေး လကျကို စောငျ့ဆှဲလိုကျသောကွောငျ့ ဒျေါလေးခမြာ အရုပျကွိုးပကျြ ကွမျးပွငျပျေါသို့ ဘုနျးခနဲ လဲကြ၏။ ပကျလကျလနျ လဲကသြှားသောဒျေါလေးကိုယျ ပျေါအတငျးတကျကာ သူ့ခန်ဓာကိုယျဖွငျ့ ဖိ၏။ ဒျေါလေးကလညျးအတငျးရုနျး၏။ တကျဖိလကျြနှငျ့ပငျ လကျတဈဖကျက ထမိနျကိုအတငျးလှနျတငျကာ စောကျဖုတျထဲလကျထညျ့၍ ရှတေို့နောကျဆုတျလုပျ၏။ ဒျေါလေးကလညျး အငွိမျမခံ ခှနျအားရှိသမြှ တှနျးဖယျ၏။ “ပှကွီး…..လှတျပါတော့…..ဒျေါလေး တောငျးပနျပါတယျ….. မလုပျပါနဲ့တော့….အား…အား…. မလုပျနဲ့…အား….ယား……..အငျး……” ပှကွီး စောကျဖုတျနှိုကျနရောမှ ထမိနျကို ဗိုကျထိဆှဲတငျ ကာ ခေါငျးကိုစောကျဖုတျကွားထဲ လြှိုသှငျး၍ ကုနျးယကျလေ၏။ တကျစှမျးသမြှ လြှာကို အတှငျးသားထဲ သှငျးကာ လကျြစုပျ၏။ ပကျကွားအကျ တဈလြှောကျ အပျေါအောကျလကျြလိုကျ၊နှုတျခမျးသားလေးတှကေို စုပျဆှဲလိုကျလုပျရငျး ဒျေါလေး၏ ခှနျအားလညျးတဈစတဈစ လြော့နညျးသှား၏။ ခါး သညျလညျးတဖွညျးဖွညျး ကော့ကော့တကျလာသညျ။ တှနျးနသေောလကျတို့ကလညျး ပှကွီးခေါငျးကို စောကျဖုတျနှငျ့ဖိကပျနသေညျ။
ပှကွီး အခွအေနကေို ရိပျမိ၏။ ထို့ကွောငျ့ စောကျဖုတျကို အသားကုနျယကျလရော အဖုတျမှအရညျမြား စိမျ့ထှကျလာသညျ။ ဒျေါလေးမှာ မလှုပျနိုငျဘဲငွိမျ ကသြှားသညျ။ ပှကွီးလညျး ဒျေါလေးပွနျမရုနျးခငျ ဘေးစောငျးလေးခှနေသေော ဒျေါလေး နောကျမှနေ၍ လီးကို အဖုတျအတှငျးသို့ လြှိသှငျး၏။ “အား……..” တုတျခိုငျသောလီးမှာ စောကျဖုတျတှငျးသို့ လမျးကွောငျးအတိုငျး တိုးဝငျသှား၏။ စောနက တဈခါပွီးထားသောကွောငျ့လီးမှာထဈမနပေဲ လြှောဝငျသှား၏။ လကျတဈဖကျက အကငြ်္ီစကို လှနျကာ စူထှားသောနို့အုံကွီးမြားကို ပှတျခြေ၏။ ဓမ်မတာကို မလှနျဆနျနိုငျသော ဒျေါလေးတဈယောကျ ပှ ကွီးလုပျသမြှကို မရုနျးကနျတော့ပေ။ ပှကွီးကလညျး နောကျဘကျမှ တဈဖောငျး ဖောငျးနဲ့ ဆောငျ့ခကျြပွငျးလာသညျ။ဒျေါလေးမှာလညျးခံရငျးခံရငျး ပှကွီး ဘကျသို့ ခါးကိုကောကျ၍ ဖငျကိုကော့ကော့ ပေးလာသညျ။ ကောကျခြိတျပွီး ဆူတငျးသော တငျသားကွီးမှာ ပှကွီး လိုးသမြှကို တဖှတျဖှတျနှငျ့ မှုတျမှုတျ ညကျညကျကအြေောငျ ခံနရေသညျ။ လိုးရငျးလိုးရငျး ဦးလေးမိနျးမကို လိုးနသေညျဆိုသောအသိက ပှကွီးအား ပို၍ဆောငျ့ခကျြပွငျးလာစသေညျ။ “ဖှတျ……ဖှတျ……..ဘှတျ…..ပွှတျ…..အား…. အား……အဟငျး……. ဘှတျ…..ပွှတျ…..ဘှတျ.. ဘှတျ.ဘှတျ..အား……အား….” “တူလေးမွနျမွနျလိုး မွနျ လေးလိုးပေး ဒျေါလေးပီးခငျြနပေီ” ပှကွီးလညျး ဒျေါလေးဖငျကွီးကိုအားရပါးရကိုငျလိုးရငျး အခကျြသုံးဆယျလောကျ မနားတမျး ဆကျတိုကျလိုးရာ ကာမ စိတျမှာ ထိပျဆုံးသို့ရောကျလာပွီး စောကျဖုတျထဲသို့ သုတျရညျပူမြား ပွညျ့လြှံအောငျ ပနျးထညျ့လိုကျလေ၏။ ဒျေါဝလေညျးအားရပီးနောကျတခြီထပျလိုးရငျး ညလုံးပေါကျသူ့တူပှကွီးလိုးသမြှကိုပုံစံမြိုးစုံနဲ့ခံနလေတေော့သညျ။ ပွီးပါပွီ
ပွကြီးတစ်ယောက် ၁၀တန်းဖြေပြီးတည်းက အိမ်မြဲနေသည်။ ကျောင်းတက်ကတည်းက အိမ်မှကျောင်း၊ ကျောင်းမှကျူရှင်၊ ကျူရှင်မှအိမ် ဤသုံးနေရာဖြင့် သာ အချိန်ကုန်နေခဲ့သည်။ မိဘများက အပြင်ထွက်ခြင်းကို ခွင့်မပြုသည့်အပြင် ပွကြီးကိုယ်တိုင်ကလည်း အိမ်မှာပဲ အိမ်တွင်းပုန်းနေရသည်ကိုသာ သဘောကျ၏။ ၁၀တန်းပြီးတော့ သူငယ်ချင်းများက ခရီးထွက်ဖို့ခေါ်တာတောင် မလိုက်ပဲဇွတ်ကျန်နေခဲ့၏။ အိမ်ကအမေက တောင်မှ “သားရယ် ပျင်းနေ မှာပေါ့ လိုက်သွားလိုက်ပာ” လို့ပြောတာတောင် မလိုက်ပဲနေခဲ့သည်။ အခုလည်း ပွကြီးအဖေ သင်္ဘောထွက်လို့လေဆိပ်ပို့ဖို့ကို မလိုက်ချင်ဘူးဟုဇွတ်ငြင်း နေသည်ကို အမေက “ဟဲ့သား ကိုယ့်အဖေခရီးထွက်မှာကို စိတ်ညစ်အောင်လို့၊ တောက် သည်းခံတာလွန်လာပြီနော် ပွကြီး” “ကလေးကိုမဆူပါနဲ့ မိန်းမ ရယ်” “ဒီမှာသား သားမလိုက်ချင်ရင်နေခဲ့၊ အဖေမရှိတုန်း မင်းအမေကို ဂရုစိုက်နော်သား ကြားလား” “ဟုတ် အဖေ” အမေလည်း မတတ်သာ၍ ဘာမှ ဆက်မပြောတော့ပေ။ဒီလိုနဲ့ အဖေခရီးထွက်ပြီးကတည်းက အိမ်မှာပွကြီးတို့ သားအမိ နှစ်ယောက်သာကျန်နေခဲ့၏။ “ကလင်…..ကလင်….” “သားရေ ဖုန်းလာနေတယ် ကိုင်လိုက်အုံး အမေ ဒီမှာ ဟင်းကိုင်နေလို့” “ဟုတ်.. ဟုတ်” ပွကြီးတစ်ယောက်အခန်းထဲအပြာကားကြည့်ပြီး ဂွင်းတိုက်နေရာမှ အောက် ထပ်သို့ဆင်းကာ ဖုန်းကိုင်လိုက်၏။
” ဟဲလို…ဟဲလို ဘယ်သူလဲ” “ပွကြီးလား…” တစ်ဖက်ကဖုန်းသံကြောင့်ပွကြီး ဇဝေဇဝါ ဖြစ်နေသည်။ “ဟုတ် ကျွန်တော်ပွကြီးပါ “ “အေး ငါ့တူ ဦးပါကွ မ င့်ဦးလေး လေးသိန်းလေကွာ” “သြော် လေးသိန်း ပြောလေ” ” အေး ဦးတို့မိသားစု နက်ဖြန်မင်းတို့ဆီလာဖို့ ဖုန်းဆက်တာ ဒါနဲ့ငါ့အစ်မ မင်းအမေရော” “အ မေကအခုဟင်းကိုင်နေလို့ သားပဲဖုန်းကိုင်လိုက်တာ အမေနဲ့ပြောအုံးမလား” “နေ နေ ငါ့တူ ဦးတို့လာမယ်ဆိုတာသာ မင်းအမေကိုပြောပေးထား ဟုတ်ပြီ လား” “ဟုတ်..ဟုတ်” “အေး..အေး ဒါပဲ ငါ့တူ” ဦးလေးသိန်း ဖုန်းချလိုက်ပြီးနောက် ပွကြီးလည်း အိမ်ပေါ်ထပ်သို့တက်ရန် ပြင်လိုက်ပြီးမှ နောက်ဖေးသို့ လှည့်ဝင်ကာ “အမေရေ ဦးလေးသိန်းတို့လင်မယား နက်ဖြန်လာမယ်တဲ့” “အေး အေး သူတို့ နေဖို့အခန်းရှင်းလိုက်အုံး” “ဟုတ် အမေ” ပွကြီးလည်းစကား ဖြတ်၍အခန်းထဲဝင်ကာ ကြည့်လက်စ ဖူးကားကိုဆက်ကြည့်၍ဂွင်းတိုက်လိုက်၏။ ထိုစဉ် အရိုင်းဆန်သော စိတ်အတွင်းသို့ လေးသိန်းမိန်းမ ဒေါ်လေး ဝေ၏ပုံရိပ်သည် တစ်စ တစ်စနှင့် တိုးဝင်လာလေသည်။ ။
ပွကြီးအမေနှင့်ဦးလေးသိန်းတို့မှာ ဖေမတူမေကွဲ တစ်ဝမ်းကွဲမောင်နှမဖြစ်သလို ဆွေမျိုးထဲတွင်လည်း အရင်းနှီးဆုံး၊ အခေါ်အပြောရှိဆုံးပင်။ပွကြီးတို့ အဘိုးအဘွားတေကလည်းနယ်တွင်နေထိုင်ကြပြီးတခါတလေသာအလည်လာကြသည်။ဦးလေးသိန်းတို့ကတော့မကြာခဏ ဆိုသလို ရန်ကုန်အလည်လာ ပြီး လာတိုင်း လာတိုင်း ရွာလက်ဆောင် တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုက ပါလာတတ်သည်။ လွန်ခဲ့သော၂ နှစ်ကမှနဖူးစာလည်ပြီး ရန်ကုန်သူ ကရင်မတစ်ယောက် နှင့်ညားကာ ရန်ကုန်မှာပဲ အခြေချနေကြသည်။ အခုဆို လေးသိန်းသားတောင်မှ ဆယ်လပြည့်တော့မည်။ လေးသိန်းမိန်းမ ဒေါ်လေးဝေသည် ဦးလေးနှင့်မယူ ခင်က အပ်ချုပ်ဆိုင်မှ အပ်ချုပ်သမ ဘဝနှင့် လုပ်ကိုင်နေခဲ့သည်။ လေးသိန်းနှင့်ယူပြီးမှ အလုပ်ထွက်ကာ ကိုယ်ပိုင်အပ်ချုပ်ဆိုင်တစ်ခုထောင်ထား၏။ ဒေါ်လေးဝေသည် ၃၂နှစ်သာရှိသေးသောလုံးကြီးပေါက်လှ ဖြစ်သလို ကရင်ကပြားဖြစ်သဖြင့် အသားမှာလည်း ဖြူစွတ်လှသည်။ တင်သားများမှာ လုံးဝန်း ပြီး ဘေးဘက်သို့ စွင့်စွင့်ငွားငွား ကားထွက်နေ၏။ ထမိန်ဝတ်တိုင်း တင်သားမှာကားထွက်နေပြီး ဘေးမှကြည့်လျှင် လွန်တရာမှကောက်ချိတ်လှ၏။ အို တစ်ခါလောက်တော့ လိုးချင်စမ်းပါဘိ။ မင်္ဂလာဆောင်မှာကတည်းက မြင်လိုက်ရသော ဒေါ်လေးဝေ၏တင်မှာ အခုချိန်ထိ မှန်းထုနေမိဆဲပင်။
“သားရေ အိမ်ရှေ့မှာကားသံကြားတယ် ထွက်ကြည့်လိုက်အုံး” “ဟုတ်..ဟုတ်” ပွကြီးတစ်ယောက် TV ကြည့်နေရာမှအိမ်ပြင်သို့ ထွက်ကြည့်လိုက်၏။ “အ မေရေ လေးသိန်းတို့လာပြီ” “လာ..လာ လေးသိန်း” ပွကြီးလည်းနောက်ခန်းတံခါးဖွင့်ကာ အိတ်များကူသယ်နေ၏။ ထိုစဉ် ကားထဲမှ ဒေါ်လေးဝေကလေးချီ ကာဆင်းလာသည်။ အိတ်သယ်သလိုနှင့် ဒေါ်လေးအား မသိမသာခိုးခိုးကြည့်နေသည်မှာ ပွကြီးသာ။ ကြီးလိုက်တဲ့အိုး မင်္ဂလာဆောင်တုန်းတောင် ဒီလောက် ကြီးမယ်မထင်။ အခုအနေအထားသည်စကောလောက်တော့ အနည်းဆုံးရှိလောက်မည်။ ဒီထက်ပိုအံ့သြသည်က ကလေးစို့နေသောရင်သားများပင်။ တွေ့စ တုံးက တင်သာကြီးတာ ရင်ကတော့ သူလိုငါလို။ မကြီးမသေးပဲအနေတော်ပင်။ အခုမြင်နေရသည်မှာလေမှုတ်ပူဖောင်းအရွယ်လောက်။လက်တစ်ဖက်နှင့်မ ဆန့် နှစ်ဖက်ပေါင်းမှဆုံမယ်ထင်။တစ်သားမွေးပြီး တစ်သွေးလှလာသော ဒေါ်လေးအားငေးရင်း စိတ်ထဲ၌ အကြိမ်တစ်ရာလောက်လိုးနေမိ၏။ ဒေါ်လေး နောက်ကလိုက်ရင်းငပဲမှာ သိသိသာသာတောင်မတ်လာ၏။ အမေတို့မမြင်ခင် အမြန်ဖုံးကာအိမ်ထဲသို့ဝင်ခဲ့၏။
ပွကြီးတစ်ယောက် ပုံမှန်အတိုင်း အိပ်ရာဝင်ခဲ့သော်လည်း ထူးထူးဆန်းဆန်းအိပ်မပျော်ပေ။ မျက်စိကိုစုံမှိတ်ပြီး အိပ်နေသော်လည်းဒေါ်လေးဝေ ကောက်ကြောင်းများကအိပ်မရအောင်နှိုးဆွပေးနေ၏။မျက်စိမှိတ်လိုက်တိုင်း ထမိန်ချွတ်ပြီး ဖင်ကုန်းပေးနေသော ဒေါ်လေးဝေပုံရိပ်များကညီတော်မောင် င ပဲအား အစွန်းကုန်ထောင်မတ်စေသည်။ ထမိန်ကိုအောက်စမှ အသာအယာလှန်တင်ပြီး အတွင်းခံလေးကိုချွတ် စောက်ဖုတ်ကိုလက်ကလေးနှင့်ဖြဲကာဖင်ကုန်းပေးနေသော ဝေကိုမှန်းရင်းအနီးရှိကြွပ်ကြွပ်အိတ်ခံကာဂွေးကိုတရစပ်ထုနေ၏။ ဂွင်းတိုက်နေစဉ် ခြေရင်းခန်းရှိလေးသိန်းတို့ထံမှ အသံသဲ့သဲ့ကိုပွကြီး တစ်ယောက်နားစွန်နားဖျား ကြားလိုက်ရ၏။ ဒီလင်မယားနှစ်ယောက် ဇာတ်လမ်းစနေပြီနဲ့ တူတယ်။ ပွကြီးဂွင်းတိုက်နေရာမှထကာလေးသိန်းအခန်းတံခါး သို့နားကပ်လိုက်၏။ “ပြတ်…ပြတ်” ဟင်…ဒါကလေးနို့တိုက်နေတာပဲ။ တော်ပြီကွာ ဂွင်းပဲပြန်တိုက်တော့မည်ဟုလှည့်အထွက် “ကိုသိန်း…တော်တော့ ကွာ..ကလေးနဲ့လုစို့နေတယ်” “ကိုယ့်မိန်းမကလည်းကွာ ညဆိုကိုယ်ကကလေးပဲပေါ့.. ဟဲ…ဟဲ” ပွကြီးလည်းအသံနှင့်သာမက အမြင်နှင့်ပါကြည့်ချင်လာ သည်။ ပွကြီးတို့အိမ်သည် သစ်သားနှစ်ထပ်အိမ်ပီပီ အခန်းများကိုသုံးထပ်သားပြားဖြင့်သာခြားထားသည်။
ဆောက်ထားသည်ကလည်းကြာ ကြွက်တွေကလည်းပေါတာကြောင့် အချို့သုံးထပ်သားများတွင် အပေါက်ငယ်လေးများမှာလက်ညိုးတစ်ချောင်းစာဝင် ဆန့်၏။ ပွကြီးတစ်ယောက်ချောင်းပေါက်ရှာရင်း လက်သန်းရွယ်အပေါက်လေးတစ်ခုကို သွားတွေ့သည်။ မြင်ကွင်းရှင်းအောင် အပေါက်ကိုလက်သန်းဖြင့် ထိုးချဲ့လိုက်သည်။ ထိုစဉ် ပွကြီးမြင်လိုက်ရသောမြင်ကွင်းမှာ ဒေါ်လေးဝေ၏ နို့တစ်ဖက်တွင် ကလေးစို့၍ ကျန်တစ်ဖက်ကို လေးသိန်းက အငမ်းမရကုန်းစုပ် နေ၏။ လေးသိန်း အစုပ်ကောင်း မှုကြောင့်ဒေါ်လေးဝေခမျာ ခေါင်းလေးမော့ မျက်လုံးကလေးစင်းပြီး တစ်ချက်တစ်ချက် နှုတ်ခမ်းကိုကိုက်ဖဲ့နေ၏။ ပွကြီး ကတော့ ကြည့်မြဲကြည့်ဆဲပင်။ “ဝေ…သားလေးအိပ်သွားပြီလား” “ရှူး…တိုးတိုး…အိပ်ပျော်နေပြီ” “အာ့ဆိုကိုယ့်ပေး ပုခက်ထဲထည့်သိပ်လိုက်မယ်” ဒေါ်လေးဝေဆီမှကလေးကိုတယုတယချီကာ ပုခက်ထဲထည့်ပြီး အနည်းငယ်လွှဲပေး၏။ ထို့နောက် ဒေါ်လေးဝေဘက်လှည့်ကာ “ဝေ…လုပ်ငန်းစရအောင်” “မဖြစ်ဘူးထင်တယ် ကိုသိန်း အောက်မှာအမရှိတယ် ပြီးတော့ သားလေးနိုးသွားလိမ့်မယ်” “မနိုးပါဘူးကွာ…အိပ်နေတာမှကျိုးနေတာပဲ အမမကြားအောင် တော့ အသံမထွက်နဲ့ပေါ့ လာပါ” “ကိုသိန်း…မဖြစ်ဘူးနော်… ကိုသိန်း… မဖြစ်ဘူး…. အား….ရှိ….အား… ကိုသိန်း” ဒေါ်လေးဝေတားချိန်မရလိုက်ပေ။ လေး သိန်းကဒေါ်လေးဝေ ထပ်မငြင်းခင်ထမိန် လှန်ကာစောက်ဖုတ်အား ကုန်းယက်လေ၏။ ဒေါ်လေးဝေကတားသာတားနေတာ တကယ်တော့ သူကိုယ်တိုင်က လည်း အယက်ခံချင်နေသည်။ လေးသိန်းခေါင်းကိုကိုင်ကာ စောက်ဖုတ်နှင့် မျက်နှာမလွတ်အောင်ကပ်ထားလိုက်၏။ လေးသိန်းတစ်ခါယက်လိုက်တိုင်း ဒေါ်လေးခမျာ ကော့ကော့တက်ကာ တဟီးဟီးနှင့်ညဉ်းနေ၏။
လေးသိန်းမှာ တောသားဆိုသော်လည်းခေပုံမပေါ်။ မယူယုံတမယ် ထည်လဲတွဲခဲ့သူမို့ ဘာဂျာပေးရာတွင်တစ်ဖက်ကမ်းခတ်ကျွမ်းကျင်လှသည်။ စောက်စိ ကလေးကိုနှုတ်ခမ်းဖြင့် ဆွဲစုပ်ကာ အတွင်းသားများကို လျှာဖြင့် ကလော်ပေး၏။ ဒေါ်လေး လက်တစ်ဖက်က လေးသိန်းခေါင်းကိုကိုင်ပြီး ကျန်တစ်ဖက်က သူနို့သူ ညှစ်ချေနေ၏။ “ကိုသိန်းရယ်….ဝေ့ နို့တွေချေပေးစမ်းပါ… ချေ..ချေ.. ဟုတ်ပြီ..ချေ….အား….ရှိ…..အား” ဒေါ်လေးတစ်ယောက် ရမက်ကြီးထန် နေ၏။ လေးသိန်းကုန်းယက်နေသော အဖုတ်တစ်ဝိုက် ကြမ်းပြင်တွင် အရည်များ စိုရွှဲနေ၏။ လေးသိန်းလည်း လျှာဖြင့်ယက်နေရုံမက လက်ညိုးနှင့် လက်ခလယ်ပူးကာ အဖုတ်ထဲသို့ တရစပ် သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက် သွင်းလိုက် ထုတ်လိုက်လုပ်နေ၏။ ” ကိုသိန်း…ဝေ..မရတော့ဘူး” ဆိုကာလေးသိန်းအား တွန်းဖယ်လိုက်ပြီး ကျောပေးကာ ထမိန်လှန်ပြီး ဖင်ကုန်းနေ၏။ ဒေါ်လေးဝေသည် အသားဖြူရုံမက ဖင်သားများမှာလည်းဖြူဖွေးပြီး တစ်ချက်ရိုက်လိုက် တိုင်း တုန်ခါသွား၏။ “ကိုသိန်း….ဝေ့ကို လိုးပေးစမ်းပါ..ဝေအရမ်းခံချင်နေပြီ” လင်မယားမို့လို့လားမသိ အင်မတန်မှ ပွင့်လင်းနေ၏။ကာမစိတ်၏တောင်း ဆိုမှုကို ဒေါ်လေးတစ်ယောက် ခါးစီးခံနေရ၏။ “နေအုံးလေ…ဝေ…ကိုယ့်ပြန်စုပ်ပေးအုံးလေ” ဒေါ်လေးဝေ ဖင်ကုန်းနေရာမှ နောက်ပြန်လှည့်ကာ လေးသိန်း ပုဆိုးအားဆွဲချွတ်လိုက်လေ၏။ ဟိုက်….။ပွကြီးမျက်လုံးပြူးသွားလေ၏။ ရှည်လျားပြီး မဲသည်းနေသော လေးသိန်းလီးကြီးမှာ ၆ လက်မပေတံတစ်ချောင်း စာလောက်ရှိမည်။ ရွာသားလီး ရှည်သည်ကို မြင်ဖူးယုံ ကြုံဖူးမှလက်ခံမိသည်။ ထို့ထက်ပိုအံ့သြသည်ကဒေါ်လေးဝေ ဖင်ကြီး။ အစက ဖင်ကုန်းနေစဉ် ပွကြီး ချောင်းပေါက်ဆီသို့မျက်နှာမူရာမှ တစ်ဖက်လှည့်သောအခါ ဒေါ်လေးဝေ ဖင်ကြီးမှာ ပွကြီး ချောင်းပေါက်နှင့်ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း တန်းနေ၏။
ပွကြီးတစ်ယောက်ပွပေါက်တိုးကာဖင်ကြီးကိုကြည့်ရင်း ဂွင်းတိုက်နေ၏။ မှန်းဆသမျှ တန်းရချက်ကတော့ ပြောမပြောချင်။ ထမိန်အောက်က မိမွေးဖမွေး စောက်ဖုတ်လေးကို မြင်ချင်ခဲ့သည်မှာ ရူးမတတ်ပေ။ အခုတော့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ကို မြင်နေရသည်။ “ဒေါ်လေးရယ်” ဟု တစ် ချက်ညဉ်းကာ တစ်ဖက်ကကြွပ်ကြွပ်အိတ်ခံ ကျန်တစ်ဖက်က အရည်ထွက်မစောရန် ဖြည်းဖြည်းချင်းထုနေ၏။ ဒေါ်လေးမှာမွေးရာပါ လီးစုပ်ကျွမ်းသည်မ သိ။ ဒေါ်လေး၏စုပ်ချက်အောက်တွင် လေးသိန်းတစ်ယောက်အသားကုန်ဖီးတက်နေ၏။ လီးစုပ်ရုံသာမက လဥကိုပါ ငုံပြီးလျှာဖြင့် ကလိပေးနေ၏။ ထို့နောက် ခေါင်းကိုကိုင်ကာ အဖုတ်ကို လိုးသလို အဆတ်မပြတ်စောင့်ပေး၏။ ဆောင့်ချက်တိုင်းမှာ တအုအု နှင့် စည်းချက်ညီလှသည်။ ဒေါ်လေးဝေ လီးစုပ် နေရာမှာ တစ်ဖက်လှည့်ကာ ဖင်ပြန်ကုန်းနေ၏။
“ကိုရယ်….လိုးပေးတော့ကွာ…” လေးသိန်းတစ်ယောက် ထိုင်နေရာမှ ကုန်းထကာ ဒူးထောက်ပြီး လီးကိုအဖုတ်ဝသို့တေ့လိုက်၏။ သို့သော် ချက်ချင်းမ သွင်းသေး အဖုတ်ကွဲကြောင်းတစ်လျှောက် လီးဖြင့်ပွတ်ဆွဲနေ၏။ “ဝေ…ကို လိုးတော့မယ်နော်” “အင်းပါ လိုး..လိုး…စောက်ဖုတ်ကွဲအောင်လိုး..ဝေ ခံချင် လှပြီ..အီး..” အရေးထဲလေးသိန်းတစ်ယောက် နားအရသာခံနေ၏။ ဒေါ်လေးဝေ တဏှာစိတ်ကြောင့် အသနားခံနေသံမှာ လေးသိန်းသာမက ပွကြီး ရမက် စိတ်ကိုပါ အုံကြွလာစေသည်။ လေးသိန်းလည်း သူ့ရှစ်လက်မ လီးရှည်ကြီးကိုဒေါ်လေးဝေ စောက်ဖုတ်အတွင်းသို့ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးသွင်း၏။ မကြာမီ လေးသိန်းလီးမှာစောက်ဖုတ်ထဲသို့အဆုံးထိ မြုပ်သွား၏။ အစ တွင်ဖြေးဖြေးချင်း ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်နေပြီး နောက်ပိုင်းတွင် အရှိန်ရလာသည်နှင့်အမျှ စည်းချက်မြန်လာသည်။ ဒေါ်လေးမှာ အပေးကောင်းသလို လေးသိန်းမှာ အလိုးကောင်းသောကြောင့် အတိုင်အဖောက်ညီစွာ ကာမအရသာကို ကောင်းစွာ ခံစားနေကြသည်။ “ကိုသိန်း…ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေးစောင့်လိုး…ဝေ့ မညှာနဲ့… လိုးသာလိုး..ဝြေပီးခါနီးပီ….အား… အား…ကောင်းလိုက်တာ ကိုရယ်…အား… အား..” “ဖတ်…….ဖွတ်……ဖတ်……..ဖွတ်….. ဘလွတ်…..ပြွတ်…အား…အား….” ဒေါ်လေးဝေ ကမ္ဘာပျက်နေသည်။ အိမ်အောက်တွင် အမေရှိသည်ကို သတိမရတော့။ ကာမစိတ်က ကြီးစိုးနေသည်။ အရှိန်ရလာသည်နှင့်အမျှ လီးတံကြီးမှာ အဖုတ်အတွင်းသို့အငမ်းမရ တိုးသွင်းနေ၏။ ဆောင့်ချက်တို့မြန်လာ သည်။ ကြမ်းလည်းကြမ်းလာသည်။ တွဲကျနေသော နို့အုံများကိုဆွဲကာ အသာကုန်မောင်းတင်နေ၏။
“ကိုသိန်း…စောင့်..စောင့်…အား… အား…” မကြာမီပင် အသားကုန်လိုးနေရာမှလင်မယားနှစ်ယောက် ပြိုင်တူပြီးသွားလေ၏။ လေးသိန်းလည်း လရည်များ ကို ဒေါ်လေးအဖုတ်ထဲသို့ ပန်းထည့်လိုက်ပြီး တစ်ချိန်တည်းမှာ ပွကြီးလည်း ကြွပ်ကြွပ်အိတ်ထဲသို့ သုတ်ရည်အမြောက်အမြား ပန်းထည့်လိုက်၏။ လေး သိန်းမှာ ဒေါ်လေးအပေါ်မှမိုးကာ နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းရှိုက်ရင်း နို့အုံများကို ဆွဲညှစ်ကာ အမောဖြေနေကြ၏။ ပွကြီးလည်း ပေနေသော သုတ်ရည်များကို တစ် သျှုးဖြင့် သုတ်ပြီးနောက် အိပ်ယာထဲလှဲကာ ပြန်အိပ်နေလိုက်၏။ ပွကြီးတစ်နေ့လုံးတစ်စက်ကလေးမှ အိနြေ္ဒရေမရပေ။ မနေ့ညကလေးသိန်းတို့ လင်မယား ပက်ပက်စက်စက်လိုးခန်းကိုမြင်ပြီးကတည်းက တစ်သက်စားမကုန်သော ဒေါ်လေးဝေ ဖင်တုံကြီးကို လိုးချင်လိုက်တာမှ ရွပိုးထိုးနေသည်။ပွကြီး ကံကောင်းချင်တော့နယ်ကအဘွားအရေးပေါ်ဆေးရုံတတ်ရမည်ဖြစ်၍အမေဖြစ်သူကခရီးထွက်ရမည် ဦးလေးသိန်းကလည်းသူပါလိုက်မည်ဆိုတော့အမေ ကသူ့တယောက်ထည်းစိတ်မချနိုင်ပေ။ထို့ကြောင့်ဒေါ်လေးဖြစ်သူကိုပါအိမ်စောင့်အတူထားခဲ့ပေသည်။ပွကြီးယောက်ညမြန်မြန်ရောက်စေချင်ပီလူကလည်း တတ်ကြွနေပီ သူ့အဒေါ် ဒေါ်ဝေကိုလည်းအရမ်းလိုးချင်နေပီ။ ဘယ်လာက်ပဲ ပျော့ခွေနေပါစေ ဖြူလွပြီး လုံးကျစ်သော တင်ပဆုံကြီးကို မြင်လိုက်တိုင်း လီး ကဆက်ခနဲ ဆက်ခနဲ တောင်မတ်လာသည်။ လိုးချင်သည်မှာလည်း လူးလိမ့်နေပြီ။ ဒီထက်ဆိုးရင်ရူးတောင်သွားနိုင်တယ်။မဖြစ်သေးဘူး။ နှစ်ခါပြန်မရနိုင်တဲ့ အခွင့်အရေးကို ပွကြီးဘယ်လိုမှလက်မလွတ်နိုင်ဘူး။ ဒီတော့ ပွကြီးတစ်ယောက် မကြံကြီးစည်ရာတွေ ဘာတွေမသိ။ ဖင်ကြီးမဒေါ်လေးကို ဒီည အသားကုန် လိုးရန်ကြံစည်တော့၏။
“ဒေါ်လေး” “ဟေ…ဘာပြောမလို့လဲသား ပြောလေ” “ဒီမှာ ဒေါ်လေးအတွက် နွားနို့ဖျော်လာတယ်” “သြော်…အေး အေး..သားရော မသောက်ဘူးလား” “ကျွန်တော်သောက်ပြီးပြီ ဒေါ်လေး” “အေး.. အေး..ကျေးဇူးပဲကွယ်” ပွကြီး နွားနို့ပေးပြီးနောက် မီးဖိုချောင်သို့ပြေးဝင်ပြီး ဒေါ်လေး သောက်မသောက်ကို သေချာအောင် ချောင်းကြည့်နေ၏။ အကြောင်းကား ဖျော်ထားသော နွားနို့ထဲတွင် ဒေါ်လေးအတွက် စပါယ်ရှယ်အိပ်ဆေးများ ပါသောကြောင့်ပင်။ တစ် ကျိုက်ပြီးတစ်ကျိုက် မော့သောက် နေသော ဒေါ်လေးအား ငေးကြည့်ရင်း စိတ်ထဲတွင် ဒီညတော့ အမုန့်းဆွဲပစ်မည် ဟုကြုံးဝါးနေ၏။နာရီဝက်ခန့်ကြာ သော်…. “သားရေ…ဒေါ်လေးအိပ်ငိုက်လာလို့ မင့်ညီသိပ်ပြီး အိပ်တော့မယ်.. တံခါးတွေသေချာပိတ်နော်” “ဟုတ်ကဲ့ ဒေါ်လေး” ဟိုက်…. ဆေးစွမ်းကတော့ ပြနေပြီ ပြနေပြီ။ ကျန်တာ နှစ်ပါးသွားကဖို့ အချိန်စောင့်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်။ ဒေါ်လေးအိပ်ပျော်မှအခြေအနေကြည့်ပြီး စခန်းသွားရမယ်။ ပွကြီးတစ်ယောက် မိန့်မိန့်ကြီးပြုံးကာ နာရီစက်သံ တစ်ချက်တစ်ချက်ကို လိုက်လံမှတ်သားနေ၏။ အို..။ အချိန်ကုန်သည်မှာနှေးလွန်းလှသည်။ နာရီဝက်ခန့်ကြာသော် ဒေါ်လေး အိပ်ပျော်နေပြီအထင်နှင့်အရဲစွန့်ကာ အိမ်ပေါ်သို့တစ်လှမ်းချင်းတိတ်ဆိတ်စွာတက်လာ၏။
အိပ်ခန်းထဲတွင်ညီလေးမှာပုခက်ထဲအိပ်ပျော်နေပြီး ဒေါ်လေးမှာဖျာပေါ်တွင် ဘေးစောင်းလျက်အိပ်ပျော်နေသည်။ အခန်းထဲအဝင်တံခါးပေါက်ဘက်ခြမ်းသို့ ကျောပေးအိပ်နေသောကြောင့် စူကားပြီးပြူထွက်နေသောဖင်တုံကြီးမှာပွကြီးအားစိန်ခေါ်နေ၏။ ပွကြီးရမက်စိတ်က အသိစိတ်ကိုလွှမ်းခြုံသွားလေ၏။ ခြေသံမကြားရအောင် တိတ်တိတ်လေး လှမ်းကာ အခန်းထဲဝင်၍ ဒေါ်လေးနောက်ဘက်တွင် လှဲကာနေရာယူလိုက်၏။ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်အိပ်ပျော်နေ သော်လည်း ပိုသေချာအောင် ဒေါ်လေးအားလှုပ်နှိုးကာ အိပ်ပျော်မပျော်အရင်စမ်း၏။ သေချာမှ လည်ဂုတ်နားကပ်ကာတစ်ချက်နမ်းရှိုက်လိုက်၏။ မွှေးလိုက် တဲ့ကိုယ်သင်းနံ့။ ဒေါ်လေးရဲ့ပင်ကိုအမွှေးနံ့တို့ကပွကြီးအားပို၍စိတ်ကြွလာစေသည်။ ပွကြီးလက်ကဒေါ်လေးခါးနားသို့ကပ်ကာ ချည်ထားသောထမိန်စကို အသာအယာလေး နောက်ဘက်မှလှမ်းဖြည်လိုက်၏။ ပြီးနောက် အင်္ကျီအတွင်းသို့လက် လျှိုကာ နို့ရည်ပြည့်တင်းနေသော ရင်သားကို ဖွဖွလေး ဆုပ်လိုက် ညှစ်လိုက် လုပ်နေ၏။
“အင်း…..” ထိုစဉ် ဒေါ်လေးဆီမှညဉ်းသံထွက်ပေါ်လာသည်။ နို့ကိုကိုင်ပြီး ညှစ်နေသောပွကြီးညဉ်းသံကြားသည်နှင့်လန့်ဖျန့်ပြီး ဇောချွေးပြန်ကာ ညှစ်နေ သောလက်ကိုရက်တန့်လိုက်၏။ ဒေါ်လေးမှာ တစ်ချက်သာညဉ်းပြီး ရှူး…ရှူးနှင့်ပြန်အိပ်ပျော်သွား၏။ ပွကြီးလည်းပြန်အိပ်ပျော်အောင်စောင့်ပြီးမှ လက်ကို ထုတ်ကာ ပြေနေသောထမိန်စအတွင်းသို့ ဗိုက်သားပေါ်မှ တိုးဝင်သွား၏။အထဲတွင် အတွင်းခံမပါသောအဖုတ်နှင့်ပွကြီးလက်တို့မှာ တဖြည်းဖြည်း မိတ် ဆက်သွား၏။ ပွကြီးလက်မှာ ဆီးခုံပေါ်ရှိ အမွှေးပါးလေးတွေကို စမ်းရင်းအက်ကြောင်းတစ်လျှောက်ပွတ်ဆွဲနေသည်။ ဒေါ်လေး အဖုတ်ကိုပွတ်ဆွဲနေသော အထိအတွေ့မှာ ကြက်သီးမွှေးညင်းထလာပြီး လီးမှာတဆက်ဆက် တောင်မတ်လာသည်။ လိုးချင်လွန်း၍ အရည်ကြည်များ ထပ်တွင်စို့လာသည်။ ဒေါ်လေး ဝေမှာဘာမှမသိ အိပ်ဆေးကြောင့်ကျိုးနေသည်။ ပွကြီးလည်း တောင်မတ်နေသောပုဆိုးထဲမှ လီးကို ထုတ်ကာ ဖင်အက်ကြောင်းတစ်လျှောက် ပွတ် ပေး၏။ ပွတ်ရင်းပွတ်ရင်း ထန်လာကာ အဆင့်တက်ပြီး ဒေါ်လေးဝေ ထမိန်ကို အောက်စမှဆွဲ လှန်တင်လိုက်၏။ ပြီးနောက် လီးကိုပေါင်နှစ်လုံးကြားထည့် ကာ ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်နေ၏။
“အီး….အား….အီး….” ဒေါ်လေးဝေ ညဉ်းသံ တစ်စတစ်စ ကျယ်လာသည်။ သို့သော်လူကမနိုးသေး။ အိမ်မက်ထဲ၌အလိုးခံနေပုံရတယ်။ မသိစိတ်က ဖီး တက်နေတာလားမသိ အဖုတ်အတွင်းမှ အရည်များစိမ့်ထွက်လာသည်။ ပွကြီးစလိုးရင်ပြင်လိုက်၏။ သူ့လီးအား တံတွေးစွတ်ကာ အဖုတ်ထဲမထည့်ခင် ချော နေအောင် ဂွင်းတိုက်လိုက်၏။ ပြီးနောက်လီးကိုအရင်းမှကိုင်၍ အဖုတ်ဝနားနှင့်လီးထိပ်ကိုတေ့ကာ ဖြည်းဖြည်းချင်း ထိုးသွင်း၏။ လေးသိန်း ညတိုင်းလိုး သည်ကတစ်ကြောင်း၊ အဖုတ်ထဲတွင် ရွှဲစိုနေသည်ကတစ်ကြောင်း လီးမှာဇွတ်မသွင်းရပဲ သူ့အလိုလို လျှောခနဲတိုးဝင်သွားသည်။ သွင်းရင်းသွင်းရင်း လီး လည်းတစ်ဆုံးဝင်နေချိန် ဒေါ်လေးမှာရုတ်တရက် လန့်နိုးလာလေ၏။ နိုးနိုးချင်း အဖုတ်ထဲလီးဝင်နေသည်ကို သိသည်နှင့် အတင်းပင် နင်းကန်ရုန်းလေ၏။ “ဟဲ့ ပွကြီး နင်….နင်…လွှတ် ငါ့ကိုလွှတ်…ခွေးကောင်….ဖယ်လို့…” အိပ်မက်ထဲ၌လေးသိန်းလိုးနေသည်ဟုထင်နေသော ဒေါ်လေးဝေတစ်ယောက် ပွကြီး မှန်းသိသော် နင်းကန်ရုန်းလေ၏။ အမှန်ကမူ နေ့လည်ကတည်းက ပွကြီးလီးကို မြင်ပြီး ခံချင်နေသည်မှာ စောက်ဖုတ်ထဲ လီးထည့်စိမ်ထားချင်လောက် အောင်ပင်။ သို့သော် လက်တွေ့တွင် လင်ပါတူ ဖြစ်နေသည်က ဒေါ်လေးဝေအား ရုန်းကန်စေ၏။ ပွကြီးမှန်းသိသော် အတင်းပင်အိပ်နေရာမှ ကုန်းထ၏။ ရုတ်တရက်ထလိုက်သောကြောင့် စောက်ဖုတ်ထဲတွင်စိမ်ထားသောပွကြီးလီးမှာ ပြွတ်ခနဲ ကျွတ်ထွက်သွား၏။
ပွကြီးကား ခေသူမဟုတ်။ အောကားပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်ကို ကြည့်ဖူးသူမို့ ဒေါ်လေးဝေ ဘယ်ယုန်မြင်၍ ဘယ်ချုံထွင်နေမှန်း တန်းခနဲရိပ်မိ၏။ ဒါ ဟာ အစမို့ မူနေတာ နောက်ကျရင် သူဟာသူအလိုလို ပါလာမှာ။ အရေးကြီးတာက ဒေါ်လေးဖီးတက်အောင်လုပ်ဖို့ဘဲ။ ရုတ်တရက်ထရပ်သော ဒေါ်လေး လက်ကို စောင့်ဆွဲလိုက်သောကြောင့် ဒေါ်လေးခမျာ အရုပ်ကြိုးပျက် ကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ ဘုန်းခနဲ လဲကျ၏။ ပက်လက်လန် လဲကျသွားသောဒေါ်လေးကိုယ် ပေါ်အတင်းတက်ကာ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ဖြင့် ဖိ၏။ ဒေါ်လေးကလည်းအတင်းရုန်း၏။ တက်ဖိလျက်နှင့်ပင် လက်တစ်ဖက်က ထမိန်ကိုအတင်းလှန်တင်ကာ စောက်ဖုတ်ထဲလက်ထည့်၍ ရှေ့တို့နောက်ဆုတ်လုပ်၏။ ဒေါ်လေးကလည်း အငြိမ်မခံ ခွန်အားရှိသမျှ တွန်းဖယ်၏။ “ပွကြီး…..လွှတ်ပါတော့…..ဒေါ်လေး တောင်းပန်ပါတယ်….. မလုပ်ပါနဲ့တော့….အား…အား…. မလုပ်နဲ့…အား….ယား……..အင်း……” ပွကြီး စောက်ဖုတ်နှိုက်နေရာမှ ထမိန်ကို ဗိုက်ထိဆွဲတင် ကာ ခေါင်းကိုစောက်ဖုတ်ကြားထဲ လျှိုသွင်း၍ ကုန်းယက်လေ၏။ တက်စွမ်းသမျှ လျှာကို အတွင်းသားထဲ သွင်းကာ လျက်စုပ်၏။ ပက်ကြားအက် တစ်လျှောက် အပေါ်အောက်လျက်လိုက်၊နှုတ်ခမ်းသားလေးတွေကို စုပ်ဆွဲလိုက်လုပ်ရင်း ဒေါ်လေး၏ ခွန်အားလည်းတစ်စတစ်စ လျော့နည်းသွား၏။ ခါး သည်လည်းတဖြည်းဖြည်း ကော့ကော့တက်လာသည်။ တွန်းနေသောလက်တို့ကလည်း ပွကြီးခေါင်းကို စောက်ဖုတ်နှင့်ဖိကပ်နေသည်။
ပွကြီး အခြေအနေကို ရိပ်မိ၏။ ထို့ကြောင့် စောက်ဖုတ်ကို အသားကုန်ယက်လေရာ အဖုတ်မှအရည်များ စိမ့်ထွက်လာသည်။ ဒေါ်လေးမှာ မလှုပ်နိုင်ဘဲငြိမ် ကျသွားသည်။ ပွကြီးလည်း ဒေါ်လေးပြန်မရုန်းခင် ဘေးစောင်းလေးခွေနေသော ဒေါ်လေး နောက်မှနေ၍ လီးကို အဖုတ်အတွင်းသို့ လျှိသွင်း၏။ “အား……..” တုတ်ခိုင်သောလီးမှာ စောက်ဖုတ်တွင်းသို့ လမ်းကြောင်းအတိုင်း တိုးဝင်သွား၏။ စောနက တစ်ခါပြီးထားသောကြောင့်လီးမှာထစ်မနေပဲ လျှောဝင်သွား၏။ လက်တစ်ဖက်က အင်္ကျီစကို လှန်ကာ စူထွားသောနို့အုံကြီးများကို ပွတ်ချေ၏။ ဓမ္မတာကို မလွန်ဆန်နိုင်သော ဒေါ်လေးတစ်ယောက် ပွ ကြီးလုပ်သမျှကို မရုန်းကန်တော့ပေ။ ပွကြီးကလည်း နောက်ဘက်မှ တစ်ဖောင်း ဖောင်းနဲ့ ဆောင့်ချက်ပြင်းလာသည်။ဒေါ်လေးမှာလည်းခံရင်းခံရင်း ပွကြီး ဘက်သို့ ခါးကိုကောက်၍ ဖင်ကိုကော့ကော့ ပေးလာသည်။ ကောက်ချိတ်ပြီး ဆူတင်းသော တင်သားကြီးမှာ ပွကြီး လိုးသမျှကို တဖွတ်ဖွတ်နှင့် မှုတ်မှုတ် ညက်ညက်ကျေအောင် ခံနေရသည်။ လိုးရင်းလိုးရင်း ဦးလေးမိန်းမကို လိုးနေသည်ဆိုသောအသိက ပွကြီးအား ပို၍ဆောင့်ချက်ပြင်းလာစေသည်။ “ဖွတ်……ဖွတ်……..ဘွတ်…..ပြွတ်…..အား…. အား……အဟင်း……. ဘွတ်…..ပြွတ်…..ဘွတ်.. ဘွတ်.ဘွတ်..အား……အား….” “တူလေးမြန်မြန်လိုး မြန် လေးလိုးပေး ဒေါ်လေးပီးချင်နေပီ” ပွကြီးလည်း ဒေါ်လေးဖင်ကြီးကိုအားရပါးရကိုင်လိုးရင်း အချက်သုံးဆယ်လောက် မနားတမ်း ဆက်တိုက်လိုးရာ ကာမ စိတ်မှာ ထိပ်ဆုံးသို့ရောက်လာပြီး စောက်ဖုတ်ထဲသို့ သုတ်ရည်ပူများ ပြည့်လျှံအောင် ပန်းထည့်လိုက်လေ၏။ ဒေါ်ဝေလည်းအားရပီးနောက်တချီထပ်လိုးရင်း ညလုံးပေါက်သူ့တူပွကြီးလိုးသမျှကိုပုံစံမျိုးစုံနဲ့ခံနေလေတော့သည်။ ပြီးပါပြီ
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ဒျေါလေးနှငျ့တဈထောငျ့တဈည